AIR-FI, nzira yekurwisa iyo inobvumidza kuburitsa data kubva kuDDR ndangariro | Linux Vakapindwa muropa
AIR-FI, nzira yekurwisa iyo inobvumidza kutora data kubva kuDDR ndangariro
Vatsvagiri vanobva kuBen-Gurion University, uchidzidza nzira dzakavanzika dzekutapurirana kwedatha kubva kumakomputa akasarudzika, vakagadzira nzira nyowani sangano renhare yekutaurirana inonzi «AIR-FI», iyo inobvumira, kuburikidza kumonyorwa kweDDR memory chips, gadzira radio radio pa frequency ye2.4 GHz, iyo inogona kutorwa ne chigadzirwa chakagoneswa Wi-Fi akati wandei mamaira.
Kubva pakuona kwekuona, iyo nzira inogona kushandiswa kuendesa kunyorera makiyi, mapassword, uye zvakavanzika data kubva kumakomputa isina network yekubatana uye inotapukirwa nespyware kana malware.
Vatsvakurudzi yakakwanisa kuwana chiyero chekuchinjisa chemazana zana pasekondi kuisa vanogamuchira Wi-Fi, senge smartphone kana Laptop, chinhambwe che180 cm. Iko kutapurirana kwekukanganisa mwero yaive 8,75%, asi kukanganisa kururamisa makodhi kwakashandiswa kuzivisa uye kugadzirisa kukanganisa kwekutapurirana.
Kuti uronge chiteshi chekutamisa data, ingotanga zvakajairika mushandisi maitiroque inogona kumhanyisa mumuchina chaiwo. Zvekugamuchira, chigadzirwa chine chip isina waya chinokwanisa kudzika-nhanho yemhepo yekutarisa inodikanwa (mukuyedza, wireless adapters zvinoenderana neAtheros AR92xx uye AR93xx machipisi akashandiswa ine firmware yakagadziridzwa iyo inotumira ruzivo nezve iyo parameter parameter inokodzera kuongororwa kweye spectral).
Kana uchigadzira chiratidzo, DDR4-2400 ndangariro yekugona yakashandiswa inoshanda panguva zhinji ye2400 MHz kugadzira kukanganiswa kwemagetsi emagetsi kana mutungamiriri achiwana yekumusoro module kuburikidza akasiyana data mabhasi.
Iyo yeWi-Fi renji inowira mune frequency 2.400-2.490 GHzndiko kuti, inoyambuka kuwanda kunoshanda ndangariro.
Vatsvakurudzi wakazviona ne traffic inorema panguva imwe chete pamabhazi e data akasiyana, magetsi emagetsi anofambiswa nehafu ye2,44 Ghz, iyo inotorwa neiyo 802.11 isina waya stack.
Iine ndangariro dzemamojuru kunze kweDDR4-2400, nzira yacho inoshanda kana nguva yekuyeuka ichishandurwa zvakarongeka, iyo inobvumidzwa mune XMP (Yakanyanya Memory Mbiri) kududzirwa.
Kugadzira chiratidzo, kuwana panguva imwe chete kubhazi kubva kune yakafanana tambo yekuuraya yakashandiswa yakasungirirwa kune akasiyana CPU cores. Ruzivo rwekunyora inobatsira muchiratidzo inoitwa uchishandisa OOK modulation yakapusa (on-off encoding) ine amplitude switch keying (ASK), umo "0" uye "1" zvakaiswa nekumisikidza akasiyana mamalopu, uye ruzivo rwunopfuudzwa pamwero wakatarwa. - kamwe padiki millisecond.
Chinjana "1" Inoita yakateedzana ndangariro inonyorwa inokonzerwa nekuteedzerana kwekuteedzera kwe1 MB yedata pakati pematanho maviri Kana uchiparadzira "0", iyo algorithm haitore chiito panguva yakatarwa yekuendesa zvishoma. Naizvozvo, kufambiswa kwe "1" kunogadzira chiratidzo, uye kufambisa kwe "0" chiratidzo kunonyangarika.
Pakati pezviyero zvekurwisa kushandiswa kweAIR-FI nzira, kuganhurwa kwenzvimbo kunotaurwa pamwe nekugadzirwa kwenzvimbo musanganon, mukati mayo zvinorambidzwa kutakura michina ine isina waya machipisi, pamwe nekuisa iyo kesi yekombuta mune Faraday cage, kuburitsa ruzha pamawifi eWi-Fi, kutanga mashure maitiro anoitwa zvechirangaridzo mashandiro uye kuongorora kutaridzika muhurongwa hwekufungidzira maitiro anoita zvisina kujairika ndangariro mashandiro.
Uyewo, pane peji revaongorori, sarudzo yedzidziso dzekutapurirana dzinoumbwa ye data rakavanzika ravakaona vachishandisa magetsi emagetsi, acoustic, kupisa uye mwenje mafomu ekuvuza.
PowerHammer: Ronga kutumirwa kwedata pamusoro petambo yemagetsi, shandisa mutoro paCUU kuti ushandure kushandiswa kwesimba CPU kushanda.
MAGNETO: kudhiza data kunoenderana nekuyera kwemagineti kusanduka kwekuchinja kunoitika panguva yeCPU kushanda.
AirHopper: kudhinda data pachiyero chinosvika makumi matanhatu mabheti pasekondi kubva paPC kuenda kune smartphone kuburikidza nekuongorora pane imwe smartphone ine FM tuner yekuvhiringidzwa kweredhiyo kunoitika kana ruzivo rwuchiratidzwa pachiratidziri.
BitWhisper - Dhata yekuchinjisa inosvika ku40cm pachiyero che1-8 bits paawa nekuyera kusanduka kweiyo PC kesi tembiricha
GSMem: kuburitswa kwedata chinhambwe chinosvika pamamirimita makumi matatu nekugadzira kupesana kwemagetsi emagetsi pane kuwanda kwemaNGM network akatorwa neiyo smartphone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AIR-FI, nzira yekurwisa iyo inobvumidza kutora data kubva kuDDR ndangariro
Firefox 84 yakatoburitswa uye ndiyo yazvino vhezheni yebrowser inoenderana neAdobe Flash